I-Dreamy Pinewood Villa phakathi kwezitshalo, izilwane ezifuywayo, imidwebo - I-Airbnb
I-Dreamy Pinewood Villa phakathi kwezitshalo, izilwane ezifuywayo, imidwebo
Madurai, Tamil Nadu, i-India
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Kalyan Surya Jagan
U-Kalyan Surya Jagan Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa e-Pinewood Cottage, eqhele ngamaminithi angu-22 ukusuka e-Madurai Meenakshi Amman Temple, i-villa enhle yamapulangwe egcwele ubuciko, izihlahla, umculo, izilwane ezifuywayo, nothando. Izwa ukuthula, imvelo nokuthula phakathi kwedolobha elidala elimatasatasa, iMadurai, elaziwa ngamagugu alo anothile nezikhumbuzo zasendulo. Indlu yamapulangwe ingenye yezinhlobo zayo eMadurai, eyakhiwe ngokhuni lukaphayini olugaywe kabusha oluvela emazweni akude.
Konke esikucelayo ukuthi ujabule, uphumule, uhleke, futhi ushiye indawo njengoba ukutholile!
I-villa inakho konke umuntu angakucela; ama-ecstasies angaphakathi kanye nezinto zokuzijabulisa zangaphandle. Indawo yasendlini ihlukaniswe yaba ikamelo lokulala, i-sit-out, nekhishi elivulekile. Igumbi lokulala linombhede omkhulu olingana nenkosi kanye ne-TV ebekwe odongeni ukuze ujabulele amadrama akho ayintandokazi e-Netflix ngokunethezeka komatilasi wethu ophephile womgogodla. Kukhona indawo yokusebenza yamalaptop akho kanye noxhumo lwe-WiFi olunesivinini esikhulu. Ngifake isiginci se-acoustic esimnyama esithandekayo kanye ne-Mridhangam(insimbi yomculo we-south Indian) kubaculi abangafundile abavakashela indawo yami. Kukhona i-Easel ethandekayo ye-Picassos ne-Da Vincis laphaya. Kunezincwadi eziningi ongazifunda ngesikhathi sakho setiye. Igumbi lokugezela elinamathiselwe lifakwe isifudumezi samanzi, isomisi sezinwele, nezinsimbi zeshawa ezisezingeni eliphezulu.
Hlala kubhavu ongaphandle futhi ushise ilanga ngosuku olushisayo noma uzicwilise phakathi nobusuku ukuze ubuke izinkanyezi ezidubulayo esibhakabhakeni esisempumalanga ngenkathi ujabulela imisindo yasebusuku. Ebusuku obubandayo, basa umlilo bese usebenzisa isiginci ukuze udlale izingoma zakho ozithandayo. Kukhona ukushwibeka okuqinile okwenziwe ngesandla phansi ukuze uhlale futhi uzwe umoya wakusihlwa noma ulale kukho uma kuzwakala kumnandi futhi kuzamazama okomntwana. Ngenze izihlalo zokulala ezimbili zakudala ezizokunikeza ukunethezeka okungekho mbhede ongakunikeza. Kukhona imidlalo yebhodi, i-carrom, namakhadi okudlala futhi. Kukhona nendawo yokudlela engaphandle eduze kwesithombe esihle semabula saseKrishna. Phezu kwakho konke lokhu, uzothola i-grand-Dane enobungani kakhulu, izinyoni ze-Guinea, kanye nechibi elihle lezinhlanzi ongahlala eceleni futhi uphuze. Kukhona ama-dumbell, ama-barbell, i-yoga mat, i-pull-up kanye ne-dips bar, ngokusebenza kwakho kwamaholide. Ngokuvamile izivakashi ngeke zizizwe zifuna ukushiya indawo, uma zinikezwe izikhala eziningi ezingaphandle ukuze ziphumule, kuzwakala njengendawo encane yokuphumula ngokwayo! Kodwa uma uzizwa uphefumulelwe, kuhlale kunezinto ezijabulisayo ongazenza e-Madurai.
1 umbhede omkhulu, Omatolasi abangu-1, imibhede yenetha engu-1
4.97 · 60 okushiwo abanye
Indawo yokuhlala iyindawo yokuhlala ezolile futhi enokuthula, etholakala osebeni lomfula iVaigai. Kunendawo eningi evulekile yokuthola umoya omusha usuku lonke.
Ibungazwe ngu-Kalyan Surya Jagan
Imvamisa, mina nobaba sikhona ukukwamukela nokukunikeza okhiye bekotishi. Kunompheki onesipiliyoni ohlala endaweni futhi ongakwazi ukuhlinzeka ngezidingo zakho zokudla ngokudla okumnandi kwaseNingizimu Indian ngezintengo ezongayo ezengeziwe. Ebusuku ungalala uphephile futhi uphilile njengoba unonogada wethu(ongakukhetha ezivakashini ezinokukhathazeka okuyimfihlo) ogade indlu ubusuku bonke.
Imvamisa, mina nobaba sikhona ukukwamukela nokukunikeza okhiye bekotishi. Kunompheki onesipiliyoni ohlala endaweni futhi ongakwazi ukuhlinzeka ngezidingo zakho zokudla ngokudla oku…
UKalyan Surya Jagan Ungumbungazi ovelele